Ilaphu le-silica ephezulu luhlobo lobushushu obuphezulu obunganyangekiyo kwimathiriyeli yefiber. Ngenxa yeempawu zayo ezinzileyo zeekhemikhali, ukumelana nobushushu obuphezulu kunye nokuchasana nokupheliswa, iimveliso zisetyenziswa kakhulu kwi-aerospace, isinyithi, ikhem ...
I-aluminium foil ifayibha enganyangekiyo nomlilo inokubizwa ngokuba yi-ceramic fiber kunye ne-aluminium silicate fiber. Ifayibha yodongwe ngummeli ophambili wefayibha engatshiyo ngengqondo ebanzi, eligama lilonke lealuminium, isilica, ialuminiyam ...
Ungayikhetha njani ilaphu elingenamlilo ngokuchanekileyo
Ilaphu engangenwa luhlobo lwelaphu elenziwe ngezinto ezingatshiyo, ezisetyenziswa ngokukodwa kuthintelo lomlilo kunye nelangatye nekudodobalisa umsebenzi okhethekileyo. Iimeko ezahlukeneyo zesicelo zineemfuno ezahlukeneyo zelaphu elingenawo umlilo. Uya...
Zeziphi izinto ezichaphazela ixabiso lelaphu elingenamlilo
Ilaphu engangenwa luhlobo lwemveliso kunye kwinqanaba eliphezulu usambathisa zombane, nto leyo ukwamkela umthwalo ombane aphezulu, kwaye zingenziwa zokwambathisa ingubo sleeve, njl Kwakhona kunempembelelo kumonakalo imibhobho kunye nokwandiswa thermal kunye con ...
Zeziphi izibonelelo zelaphu lesilicone
Iteyiphu ye-Silicone luhlobo lweasidi kunye neemveliso ezinganyangekiyo ezinxibe i-alkali, ezihlala zisetyenziswa kwizityalo zamachiza nakwizinto zokucoca kunye nakwamanye amashishini, yimveliso enokumelana noxinzelelo oluphezulu. Ke, zeziphi izibonelelo zokusebenza ezilungileyo zale mveliso? Ityhubhu yerabha eyenziwe ngelaphu lesilic ...